Mareykanka oo liiska argagixisada ku daray xubno maal-geliya Daacish oo ku sugan Koonfur Afrika
Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an in ay carqaladeyso iyo in ay kala dhantaasho taageerada dhaqaale ee ururada aragagixisada, oo ay ku jiraan dhammaan laamaha ISIS.
Qaaradda Africa, Mareykanka wuxuu kala shaqeynayaa bah-wadaagtiisa oo ay ka mid tahay South Africa, sidii dhabarka looga jebin lahaa taageerada maaliyadeed ee shabakadda ISIS ee qaaradda.
Dowladda Mareykanka ayaa si gaar ah uga walaacsan khatarta argagixiso ee sii kordheysa ee Africa. ISIS iyo laamaheeda iyo shabakadaheeda ayaa ku baahay meelo badan oo ka mid ah Africa kuna tallaaleen kifirkooda xagjirnimada ah taasoo sii hurisay colaadaha muddada soo jiitamayay, arrintaas oo qaaradda gelisay waji cusub oo halistiisa leh.
“Maalgelinta sii socota ayaa ah halbowlaha argagixisada,” sidaasi waxaa ka digay danjiraha Mareykanka Jeffrey DeLaurentis, oo ah lataliye sare oo dhinaca arrimaha siyaasadda ee Qaramada Midoobay. Wuxuu yiri “Waa inaan barataarnaa dadaalkeenna si aan u daba-galno kuwa dhaqaalaha ku taageera argagixisada iyo kuwa u fududeeya lacagta, arrintaan ayaa ka hor-istaageysa ilo-dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo ka faa’iideysta nidaamyada dhaqaale ee daciifka ah iyo hey’adaha kor kala socda.”
Si looga guul-gaaro hadafkaan, ayay dowladda Mareykanka liiska la calaamadeeyay ku dartay afar xubin oo dhanka maaliyadda ka taageera ISIS iyo ISIS-Mozambique, ama ISIS-M, kuwaas oo ku sugan dalka South Africa.
Xubnahaan ayaa kala ah Farhad Hoomer, Siraaj Miller, Abdella Hussein Abadigga, iyo Peter Charles Mbaga. Raggaan ayaa aqoonsigooda argagixisada loo cuskaday xeerka E.O. 13224, oo lagu bartilmaameedsado kooxaha argagixisada iyo taageerayaashoosa iyo wixi kale ee la midka ah.
Xubnaha ISIS iyo kuwa xiriirka la leh ee South Africa ayaa door ka ciyaaraha fududeynta xawilaadda lacagaha ka yimaada qeybaha sare ee ISIS ee loo gudbiyo laamaha kala duwan ee Africa.
Kuwani hadda la calaamadeeyay ayaa bixinayay taageero maaliyadeed ama u adeegayay ka hogaamiyeyaal ASIS oo fadhigoodu yahay South Africa.
ISIS iyo ISIS-M waa ururo argagixiso oo siyaabo kala duwan loogu kala magacaabay iyada oo la raacayo Xeerka Jinsiyadaha iyo Socdaalka ee Ururada Argagixisada Caalamiga ah, kaas oo loo cuskaday maadada E.O. 13224.
Qaar ka mid ah canaasirta ISIS ayaa isku dayay in ay saameyntooda ku faafiyaan Africa iyaga ooa deegsanaya howlgallo ballaaran. Laamaha ISIS ee Africa ayaa ku tiirsan dhaqaalo uga yimaada gudaha, sida xatooyo, lacago ay si khasab ah uga qaataan dadka deegaanka, afduub iyo madax-furasho iyo sidoo kale taageero dhaqaale oo uga yimaada laamaha saree e ISIS.
Dowladda Mareykanka waxay sii wadi doontaa in ay tallaabo u qaado sidii ay u arbushi laheyd isla markaana dibadda ugu soo saari laheyd kuwa muhiimka ah ee lacagaha ku taageera ISIS iyo ISIS-M ee usoo ururiya kaalmooyinka kana faa’iideysta nidaamka maaliyadda ee South Africa si ay u fududeeyaan dhaqaalaha loo gudbiyo laamaha ISIS iyo shabakadaheeda guud ahaan Africa.